Herculean task of sanitization and rebuilding Burma ” သမိုင်းထဲက အမှိုက်ပုံ “ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeHerculean task of sanitization and rebuilding Burma ” သမိုင်းထဲက အမှိုက်ပုံ “
Herculean task of sanitization and rebuilding Burma ” သမိုင်းထဲက အမှိုက်ပုံ “
Once uponatime (about7yrs ago) I wrote in Burma Digest about this political rubbish, wrongly thinking that Daw Suu alone could clean it. https://sanooaung.wordpress.com/2007/10/14/herculean-task-of-sanitization-and-rebuilding-burma/
” သမိုင်းထဲက အမှိုက်ပုံ ”
အိမ်ဦးခန်းမှာ ရက်ရှည်လများကြာနေတဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးတပုံ ရှိနေတယ် ဆိုပါတော့။
နိုင်ငံရေး စစ်စစ် က အဲဒီအမှိုက်ကို မရှင်းဘဲ၊ အနံ့မထွက်အောင်ဆေးဖြန်း၊ လူမမြင်အောင် အဖုံးအကာ ထား ရုံ ဖြေရှင်းတာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီလို တဒင်္ဂ အနံ့မရရုံ၊ မမြင်ရရုံ လုပ်တာ နိုင်ငံရေးလုပ်စားတာ။
ရှိပြီးသား အမှိုက်ပုံကို ဒီအတိုင်းဇွတ်မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ နောက်ထပ်အမှိုက်မပုံရ၊ အမှိုက်မပစ်ရ အောင် ပညာတွေပေး၊ စည်းကမ်းတွေ ထုတ်နေလဲ ရှိပြီးသားအမှိုက်ပုံဟောင်းကြောင့် ခြင်ယင်ကြွက်တွေ သောင်းကျမ်း ရောဂါဘယတွေဖြစ်နေဦးမှာပဲ။
နိုင်ငံရေးစစ်စစ်၊ တော်လှန်ရေးစစ်စစ်ဟာ အမှိုက်ပုံဟောင်းနဲ့ တူတဲ့ စနစ်ဟောင်း ခေတ်ဟောင်းက အရာတွေကို မြေလှန်ရှင်းလင်းပစ်ဖို့ လိုတယ်။
တချို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဲသလို ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကို ပျော့ညံ့စွာ လုပ်ရင်း၊ တချို့ကလဲ ဖေါက်ပြန်သွားရင်း အမှိုက်ပုံ မရှင်းနိုင်တဲ့ အပြင် သူတို့ကိုယ်တိုင် ‘အမှိုက်ပုံအသစ်’ ထပ်ဖြစ်သွားတယ်။ သမိုင်းထဲက အမှိုက်ပုံတွေ ဆိုပါတော့။
ဥပမာ ပြောရရင် တရုတ်ပြည်မှာ မန်ချူးဧကရာဇ်တွေကြီးစိုးပြီး မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်ကြီးဟာ အမှိုက်ပုံကြီး လို ရှိခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာ အမှိုက်ပုံကို ဖယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်ဟာ လမ်းခုလတ်မှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ အမှိုက်ပုံကြီး မဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ဘူး။ သို့သော် သူဟာ တစိတ်တဒေသတော့ ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့၊ အမှိုက်ပုံရှင်းလင်းရေး ထောက်ကူခဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သို့ပေမဲ့ သူ့လက်ရုံးတဆူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချန်ကေရှိတ်ဟာ ဖေါက်ပြန်ပြီးစစ်ဘုရင်ဝါဒကျင့်သုံး( သူ့ရှေ့မှာ ဧကရာဇ် ခံယူခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက် ရှိသေးတယ် ) သမိုင်းအမှိုက်ပုံသစ် ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။
မော်စီတုန်းတို့ ဟာ ချန်ကေရှိတ်စစ်ဘုရင်အမှိုက်ပုံသစ်တွေကိုကော၊ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် အမှိုက်ပုံဟောင်းကြွင်းကျန်တွေကော ရှင့်းလင်းရေး လုပ်ခဲ့ကြရတယ်။
မော်စီတုန်းလက်ထက်အမှားအယွင်းတွေ အများကြီး ကျူးလွန်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအုတ်မြစ်ကောင်းချပေးနိုင်ခဲ့တာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရဘူး။ အဲဒီအုတ်မြစ်ကောင်းပေါ်မှာ တိတ်ရှောင်ဖိန် က အဆောက်အဦကောင်းတည်ဆောက် နိုင်တဲ့အတွက် ဒီကနေ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတရုတ်ပြည်ကြီး ဖြစ်လာတာပဲ။
မန်ချူးဧကရာဇ်တွေ၊ စစ်ဘုရင်တွေ အမှိုက်တသောသောနဲ့ ဆိုရင် တရုတ်ပြည်ဟာ ချမ်းသာလာရင်တောင် ဆွေစုမျိုးစု တစုလက်ထဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဓနတွေ အာဏာတွေ ရှိနေပြီး သာမန်ပြည်သူတွေ ဟာ နင်းပြားဖြစ်နေကြဦးမှာပဲ။
ရုရှားမှာလဲ လီနင်တို့ ဇာဘုရင်အမှိုက်ပုံကြီး ရှင်းနိုင်ပေလို့ပေါ့။
မြန်မာ့သမိုင်းထဲက ၂၁ဦးဂျီစီဘီအေ တို့၊ ဦးစော တို့၊ ဆာဂျေအေမောင်ကြီးတို့ ဆိုတာ ကိုလိုနီအမှိုက်ပုံပေါ် ထပ်ဆင့်တဲ့ ရာထူးအာဏာယူရုံသက်သက် ကိုယ်တိုင် ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းအမှိုက်ပုံတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။
NLD အစိုးရ ကကော ဘာလဲ။
နှစ်၆၀ ကျော် ကြမ်းဆွေး တိုင်ဆွေး အိမ်ဦးခန်းနေရာယူနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်အမှိုက်ပုံကို မရှင်းလင်းဘဲ၊ အနံ့ပျောက်ဆေးဖြန်း၊
အမှိုက်ဟောင်းတွေကို ဆေးရောင်ခြယ်၊ အနားမှာ ပန်းအိုးတွေချ အလှဆင်ပြီး ဒေါ်စု တယောက် ‘နိုင်ငံရေးအတု’ ‘တော်လှန်ရေးအတု’ နဲ့ လူထုကို လှည့်စားနေလေရဲ့။
ဆွန်ယက်ဆင် လို သေမလား၊
ချန်ကေရှိတ် လို သမိုင်းထဲက အမှိုက်ပုံ ဖြစ်ကျန်ဦးမလား၊
Herculean task of sanitization and rebuilding Burma
The SPDC and Myanmar Military today is like the Augean Stables. The stables of Augeas, the mythological King of Elis, in Greece, housed his great herd of oxen. They were never cleaned. Hercules was tasked to cleanse them, which he did by diverting the course ofariver through them. When he completed his tasks, he gained immortality.
SPDC, which controlled the Myanmar Military, is much weaker than Hercules. Neither Than Shwe, Maung Aye, Shwe Man nor could any one of the SPDC Myanmar Military Generals could be able to clear away the accumulated mass of rubbish of its own doing: corruption, mismanagement, and the deteriorating condition of the people’s, physical health, moral conditions, psychological sufferings, religious intolerances, economical destruction, low GDP, low earning power, rising cost of living and legal mess. Burma as the country is financially poor economically ruined and Burmese people are physically and mentally weak nowadays.
None in Myanmar Military could divert the course of the river of justice, and have the right to cleanse it of its uncontrollable accumulated debris of past neglect, misuse of power, and all the ills of the successive dictatorship, autocratic and despotic governments. If only Daw Aung San Su Kyi is allowed to form and lead the Coalition Government, she could surely divert the river, clean the country and also let the fresh inflow of investment, capital, manpower and push our country to leap forward with the incoming wave or tide of progress with her Herculean mental strength and willpower, mobilizing all the people of Burma and of course with the help of the whole world.
So if they really are patriotic, love Burma/Myanmar and wish the country to prosper, peaceful andprogress, the present ruling Junta Generals should allow Daw Su to recruit the help of all the Burmese people residing inside and abroad, opposition parties, all the ethnic minority groups and different race and religious groups to do the Herculean task of cleaning our beloved country.
If you Generals are scared of your selves, your properties, relatives, friends etc and if also scared of disintegrating of our beloved country, Burma/Myanmar into pieces, you just keep your SPDC as the Guardian Council or Upper House, as Ne Win’s Revolution council or Socialist party had done (but should not interfere in the daily running of the Government like Ne Win had done before.) or as Iran’s Mullahs’ Council or Pakistan’s President Musharaaf is doing now and let Daw Aung San Su Kyi to form Coalition Government and allow to run the country’s day to day affairs without any interruption from Army until and unless it really affects your Military and the security or stability of the country.
In this way we can start to haveavery good understanding of each other and could nurtureamutual trust and real confidence building on each other. With all the help from the foreign powers and the wealth of the Burmese abroad that means financial and various expertise Burma/Myanmar could easily surpass all our neighbours.
Dear Generals. We all Burmese are kind and gentle. We all are ready to forgive and forget. We would not seek for revenge. Just see what happen in Philippines and Indonesia. After Marcos, Philippines people power icon Corazan Aquino was democratically replaced by Ramos, the right hand man of Marcos. In Indonesia, after Suhato, people now choose the party to rule the country democratically and that party is working on friendly terms with the military. So just let Prime Minister Daw Su to run the show with the ethnic leaders. Please support her Cabinet with sincerity without any sabotage. Burmese people who distaste all of you may one day even turn round and ask your help in building our country. Just for now please step aside and allow Daw Su and her Cabinet to rule Burma/Myanma. If not, 666 movement or any other impending uprising could damage all of you.
← ” လမ်းပေါ်နိုင်ငံရေး တဲ့ လားဗျာ “
ဒီနေ့မြန်မာ့တပ်မတော်ဆိုတာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကမွေးထုတ်လိုက်ပြီး ဖက်ဆစ်နည်းနာကိုခံယူကျင့်သုံးနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုပါဘဲ →